DF oo soo rogeysa ganaax ku aadan xirashadda Af-xirka [Face Mask] | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Fadraaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ganaax la dul dhigi doono dadka jabinaya amarka iyo talooyinka ka soo baxaya Dowladda ee looga hor tagayo Coronavirus.
MUQDISHO, Soomaliya - Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka ka hor yimaada amarada iyo talooyinka Dowladdu soo jeedisay ee lagu xakameynayo COVID-19 la ganaaxi doono.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii Dowladda Fadaraalku soo rogtay amarro la doonayo in la hirgaliyo si loo xakameeyo Coronavirus-ka faafaya, wuxuuna Cumar Finish sheegay in bulshadu aysan wali si buuxda u dhaqan galin awaamiirta la faray.
Duqa Caasimadda waxa uu caddeeyay in laga billaabo 15-ka bishaan Maarso, la soo rogi doono ganaax qabanaya qof kasta oo aan amaradii DF ka soo baxay u hoggaansamin, wuxuuna qof kasta faray inuu xirto face mask.
Cumar Finsh wuxuu xusay in Dowladdu ay xiri doonto duulimaadyada haddi xaaladdu sidaa sii ahaato, wuxuu sii xoojiyay amaradii hore.